China Hot Sale Wood Door Making Machine Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router Manufacturer and Supplier |fara tampon'ny
3D CNC router milina
Hot Sale Wood Door Making Machine Atc 3 Axis Woodworking Machine 1325 CNC Router
Endriky ny milina
*Efatra rivotra mangatsiaka spindle (HQD na Italia HSD spindle azo atao), avo lenta ary 24h miasa tsy tapaka.
* HIWIN square rail, occlusion tsara sy henjana, tsy misy fanodinkodinana mandritra ny fampiasana maharitra.
* Fifindran'ny fitaovam-pitaterana haingam-pandeha ho an'ny XY axis, ary fifindran'ny visy baolina avo lenta ho an'ny Z axis,
miantoka ny hafainganam-pandeha avo sy ny mazava tsara amin'ny fotoana iray ihany.
* ATC pneumatic ho an'ny spindles 3 miaraka amin'ny fitaovana samihafa.Ny fanovana fitaovana mandeha ho azy dia mamonjy fotoana hanovana fitaovana.
* Vacuum latabatra misy banga paompy, afaka haingana sy stably manamboatra fitaovana eo amin'ny latabatra ho an'ny sokitra, mamonjy fotoana sy ny fanompoana ela velona.
* Rafitra fanaraha-maso: Mampiasa ny rafitra fanaraha-maso Dsp, Nc-studio, Syntec avy any Taiwan na OSAI avy any Europ izahay.
MODELY APEX1325 / APEX1530 / APEX2030 / APEX2040
Faritra miasa 2500* 1300mm / 3000* 1500mm / 3000*2000mm / 4000* 2000mm
Rafitra fanaraha-maso Fanaraha-maso Ncstudio, NK280 tsy voatery, SYNTEC
Motor sy mpamily Step motor / Servo motor
Lalana mpitari-dalana Taiwan HIWIN square guide rail
Fomba fampitana Fitaovana fitehirizana tsara indrindra
Firafitry ny latabatra Vacuum sy T-slot table
Rafitra latabatra Fiara vy weded
Spindle Power 3.5kw / 4.5kw / 5.5kw / 9kw rivotra mangatsiaka spindle
Max Speed 24000 RPM
Variable Frequency Drive Fuling inverter / Delta inverter
Rafitra fampangatsiahana Rivotra elektrika Mangatsiaka
#Pneumatic 3 lohany fampangatsiahana rivotra:
3.5kw / 4.5kw / 5.5kw rivotra mangatsiaka spindle
#Linear Guide Rails:
PMI/THK tari-dalana ho an'ny machining mazava tsara amin'ny hafainganam-pandeha avo.Fampiasana mitsitsy angovo sy fiainana maharitra.
#Yaskawa servo motor sy mpamily:
Izahay dia mampiasa japoney YASKAWA Servo motera, marika motera servo malaza eran'izao tontolo izao noho ny fahitsiana tsara, ny fandehanana malefaka, tsy misy vibration amin'ny hafainganam-pandeha ambany, tsy misy fidinana tampoka na dia amin'ny hafainganam-pandeha avo aza, ny fahaiza-manao enta-mavesatra, ny fanaraha-maso azo antoka, sns.
Masinina CNC haingana sy marina.Mijery mialoha miaraka amin'ny sakana 256 kajy mialoha raha manatsara ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny feedforward.Tantano ny gazetibokin'ny fitaovana, ny fiainan'ny fitaovana, ary ny maro hafa.
WMH Herion helical rack and pinion drives dia manome haingam-pandeha marina sy mavitrika.
Ny famolavolana maharitra azy ireo dia miantoka ny fiainana maharitra amin'ny fikojakojana kely.Mahay mamindra ny entana mavesatra.
Mihazakazaka mangina sy mangatsiatsiaka.Ny famolavolana 100% tsy misy menaka sy ny fiainana lava lava dia miantoka ny fikojakojana kely indrindra.
Indostria azo ampiharina
(1) indostrian'ny hazo:
Ny milina fanoratana dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana sokitra hazo sokitra, boaty firavaka hazo, vokatra haingon-trano sy firavaka voasokitra sy ny sisa.
(2) Indostrian'ny dokam-barotra:
Ny milina fanoratana dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana sokitra famantarana isan-karazany, logos, badge, tontonana, asa tanana sy haingo, haingon-trano.
(3) Indostria hafa:
Azo ampiasaina amin'ny sarintany, landscapes, calligraphy, tombo-kase ary sary hafa sy sary sokitra hafa ary famokarana hafa.
1. Alohan'ny fivarotana:
Ho eto foana izahay hanome izay vaovao ilainao amin'ny fotoana voalohany, ary hanome soso-kevitra matihanina araka ny tena ilainao maimaim-poana;
2. Nandritra ny fivarotana:
Hikarakara ny famokarana sy ny fandefasana entana rehetra izahay, rehefa vonona ny zava-drehetra, dia holazainay aminao fa mandeha tsara ny zava-drehetra eto;
3. Aorian'ny fivarotana:
Hanome boky fampianarana amin'ny teny anglisy izahay.
4. Raha manana fanontaniana ianao mandritra ny fampiasana sy fikojakojana, dia hamaly anao amin'ny Internet na amin'ny antso ny injeniera mahay miteny anglisy.
5.Machine fiantohana dia roa taona.Koa raha misy fahasimbana tsy nahy ny milinanao dia hanome kojakoja maimaim-poana izahay.
Raha manana olana lehibe ny milinanao raha sendra sendra, dia ho tonga any ny injenieranay mba hanamboatra sy hanamboatra.
Inona no tokony hotandremana rehefa mametraka hazo cnc router?
Aorian'nyhazo cnc router novidina, voajanahary ny fametrahana sy ny debug.Na dia manome tolotra toy izany aza ny mpanamboatra, dia mila manamboatra azy irery isika.Noho izany, tsy maintsy mianatra ny fomba fametrahana nyhazo cnc router marina.Noho izany, ny zava-dehibe dia tokony hojerena rehefa mametraka a hazo cnc router?
1. Aza mametraka nyhazo cnc router mandritra ny tselatra na kotroka, ary aza mametraka ny faladiany amin'ny toerana mando, ary aza mikasika ny tadin-jiro tsy misy insulated, raha tsy izany dia mety hitranga ny lozam-pifamoivoizana.
2. Ny installer nyhazo cnc router tsy maintsy manana fahatakarana lalina momba nycnc ny router milina, ary afaka miasa sy mampiasa izany araka ny fepetra arahana mba hampihenana ny mety ho loza.
3. Ny famatsiana herinaratra malefaka nyhazo cnc router Ilaina ny 210V-230V.Raha toa ka tsy milamina ny voltase famatsiana herinaratra na misy fitaovana elektrika mahery vaika manodidina, dia tsy maintsy apetraka eo ambany fitarihan'ny matihanina ny famatsiana herinaratra voafehy.
4. Ny akoran'nyhazo cnc router dia vita amin`ny metaly, ka ny tany tariby tsy maintsy mifandray mba hahazoana antoka ny fiarovana ny famokarana.Ny tariby plug-in dia tokony hiasa rehefa tapaka ny herinaratra, ary voarara tanteraka ny fandidiana mivantana.
5. Ampahany amin'ny firafitry ny CNCny router mampiasa aviation aluminium castings, izay somary malefaka sy malefaka, koa aza mampiasa hery be loatra rehefa mametraka ny screws mba tsy solafaka.
teo aloha: Mpanangona vovoka
Manaraka: 3 Axis CNC router milina sokitra hazo ho an'ny MDF Kitchen Cabinet Furniture
CNC Router 3 Axis EPS Foam Cutting Machine Sink...
CNC Router Machine 4 Axis EPS ho an'ny Foam, Wood, A ...
Fampiasana betsaka Auto Tool Changer Wood Design Engra ...
4 Axis CNC Foam Cutter 2021 varotra mafana
Orinasa mivantana famatsiana 4 Axis Automatic Tool C ...
ATC CNC Router miaraka amin'ny Automatic Tool Changer Spin...